Shiinaha caaga caaga warshad caaryada iyo saarayaasha | HEYA
Caaryada Guddoomiyaha caaga waxaa loola jeedaa caaryada loo isticmaalo in lagu soo saaro Qaab Guddoomiyaha leh mashiinka wax taaj oo kale duray. Marka loo eego qaababka wax soo saarka ee kala duwan, waxa kale oo jira wasakhahaasi oo la isku duro kursiga bannaanka, wasakhahaasi kursi caag ah oo is dulsaaran, laalaabida kursi soo saaraha caaryada, caaryada kursi xeebta, iwm.
Magaca Badeecada Caaryada Guddoomiyaha caaga
S: Mudo intee le'eg ayaa waqtiga dhalmadaada?
J: Waxay kuxirantahay qaab dhismeedka caaryada iyo cabirka.
Guud ahaan waa 3 ~ 15 maalmood oo loogu talagalay naqshadeynta caaryada, iyo 15 ~ 60days wax soo saarka caaryada ka dib markii Heya Mold ay heshay lacagtaada deebaajiga iyo xaqiijinta naqshadeynta caaryada.
S: Sidee loo diraa muunadda tijaabada? ma lacag la’aanbaa mise waa siyaado?
A: Heya Mold wuxuu u soo diri doonaa muunad tijaabo ah DHL, UPS, EMS, FEDEX ama TNT. Iyo oraahda aan ku siineyno oo ay ku jiraan qiimaha sambal bixinta 1-2 jeer.
1.Adopt softiweer CAD / CAE / CAM oo caalami ah oo horumarsan oo leh hal abuur iyo dhaqso u koraya kooxda R&D
2.From wax soo saarka naqshadeynta gaarsiinta caaryada, oo uu kormeero hal maamule, hubi inaysan jirin wax dhibaato ah.
3.Waxaad aqoon u leedahay qaab dhismeedka wax soo saarka iyo caaryada, qaab dhismeedka habboon iyo xasilloonida ee caaryada, taas oo si fudud loogu shaqeyn karo loona ilaalin karo macaamiisha.
4.Qarsoodi, si loogu hoggaansamo anshaxa aasaasiga ah ee ganacsiga iyo asturnaanta macaamiisha
Naqshadaynta iyo naqshadeynta baakadka, wax soo saarka MA waxaa loo isticmaali karaa iibka suuqyada
6.Wax ku ool ah, kaydi waqtiga macaamiisha oo buuxi wixii ka badan ee shaqada.
Hore: Caaga Ratten caaga Qaab
Xiga: Wasakhda duritaanka Kuraasta banaanka